Ungachinja sei scroll scroll ye iPad yako uchishandisa trackpad | IPhone nhau
Mazuva mashoma apfuura Apple yakavhura zviri pamutemo keyboard yayo nyowani Mashiripiti Keyobard. Iyi keyboard inowirirana neiyo 11 uye 12,9-inch iPad Pro uye ine hupenyu hwebhatiri hunosvika kumwedzi pamubhadharo mumwe chete. Zvakanakisa pane zvese izvo inosanganisira trackpad, iyo inowedzera mikana mukati mePOSOS. Uye zvakare, iOS 13.4 yatobvumidza batanidza zvekunze zvishongedzo senge ekunze trackpads kana mbeva pasina kushandisa iyo Apple keyboard. Nhasi tinokudzidzisa iwe ku chinja scroll scroll pane yako iPad uchinge uchishandisa trackpad kana yekunze mbeva.
1 Unosarudza wakasarudzika kana chakagadzirwa mupumburu?
2 Maitiro ekugadzirisa iyo trackpad scroll pane yako iPad?
Unosarudza wakasarudzika kana chakagadzirwa mupumburu?
Kupuruzira ndiyo maitiro atinoita patinotsvedza chigunwe chedu pasi pechidzitiro chePadad kutenderera kutenderera. Avo vedu vanozivikanwa munzvimbo dzeApple senge iOS kana macOS tinoshandiswa kune zvavanodaidza kubva kuapuro hombe mupumburu wepanyama. Ndokunge, isu tinoshandisa iyo trackpad nemunwe wedu sekunge yaive pivot iyo yakatarirwa kuchiratidziri. Kana isu tikatungamira iyo pivot kumusoro, iyo skrini inoenda pasi nekuti isu tiri kufambisa iyo skrini kumusoro. Kune rimwe divi, kana tikatsvedza pivot pasi, iyo skrini inokwira kumusoro nekuti tiri kufambisa iyo skrini pasi.
Nekudaro, mune mamwe masisitimu anoshanda senge Windows mupumburu uyu hauna kuenzana. Ndicho chakadeedzwa chakagadzirwa scroll. Ndokunge, patinotsvedza chigunwe chedu pa trackpad kumusoro, iyo skrini inokwira kumusoro. Kunyange isu tikatsvedza, iyo skrini inodzika. Kune avo vedu avo vakajaira kupuruzira kwechisikigo, iyi yekutsikisa nzira inonetsa kwatiri kuti tinzwisise. Asi, shure kwezvose, idzo nzira dzakasiyana dzekuwana izvo zvakafanana zvemukati.
Maitiro ekugadzirisa iyo trackpad scroll pane yako iPad?
Zvino mubvunzo unouya riini Isu tinosuma aya mazwi tichishandisa yekunze trackpad kana mbeva. Nekuti zviri pachena kuti kushandisa iyo yekubata skrini isu tinoshandisa yakasikwa scroll. Nekudaro, kana isu tikasuma zvekunze zvekushandisa tinogona kuva nemaviri modes.
Para chinja scroll scroll apo isu tiri kushandisa chishongedzo, zvichave zvakakwana kutevedzera anotevera matanho:
Pinda Zvirongwa> Zvakajairika pane yako iPad kana iOS ine vhezheni yakaenzana kana kupfuura 13.4.
Paunenge uine mbeva yako kana trackpad yakabatana, chikamu chitsva chichaonekwa "Mouse uye trackpad", zita rinozoshanduka zvichienderana nekuti mese makaita zvekubatanidza kana imwe chete yezvinhu zviviri izvi.
Iwe unenge uine sarudzo inonzi «Natural mupumburu» kuti iwe unogona kumisa kana kudzima zvichienderana nechinhu chaunobva nacho uye chii chaunoziva zvakanyanya kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ungachinja sei scroll scroll ye iPad yako uchishandisa trackpad